Faka i-geolocation ezithombeni zakho kusuka ezithombeni | Ngivela kwa-mac
UJavier Porcar | | Izifundiswa, eziningana
Singasho ukuthi uhlelo lokusebenza lokuzenzakalelayo lokuthwebula ku-macOS, uku-oda nokufaka ikhathalogi yezithombe zethu, luhlangabezana okungenani nezakhiwo zalo ezibalulekile. Naye ungabhala zonke izithombe esifuna ukuzigcina kwi-Mac yethu futhi uzihlunge ngezinsuku, ama-albhamu adalwe yithina futhi nokuthola ubuso bendawo engaphansi.
Ngakolunye uhlangothi, sinezesekeli ezimbili. Enye yazo yingxenye ye- izandiso, lapho abathuthukisi bezinhlelo zokusebenza zokuhlela isithombe, bavumela ukufinyelela kuhlelo lwabo ukuze bazihlele ngendlela esithanda ngayo, ngakolunye uhlangothi, Izici ze-MacOS.
Futhi ngenxa yale misebenzi, Phakathi kwezinye izinto, singangeza indawo lapho lezi zithombe zithathwe khona. Lokhu kuyasiza kakhulu, uma ufuna ukuthola izithombe ozithathe endaweni ethile. Kulezi zinsuku, uma sisebenzise indawo kumakhalekhukhwini, le ndawo kufanele ibe khona ngokuzenzakalela ezithombeni futhi idlulisele ku-Mac yethu lapho ingeniswa. Kepha amanye amakhamera, njengamanye amakhamera we-reflex, akudingeki ukuthi aphathe imininingwane ye-geolocation.
Ngakho-ke, kufanele sithole izithombe ezingenalo lolu lwazi futhi uma sezitholakele, ngamaqembu endawo efanayo, sizofaka ikheli ngendlela eqonde kakhulu. Ukwenza lokhu, sizosebenzisa i- Ama-albhamu wezithombe ze-Smart. Okwakho:
Cindezela Ifayela bese I-albhamu entsha ehlakaniphile.
Manje kufanele sikhethe imingcele yokwenza i-albhamu lapho izithombe ezingathwali zitholakala khona geolocation Ngakho-ke, singakwazi a inombolo uthanda: ayikho indawo.
Kokwehlayo okuthathu okuvela ngaphansi kombhalo Gcwalisa umbandela olandelayo, sikhetha:
Akuyona / ayi.
Siyinika ukwamukela futhi i-albhamu idalwe ngazo zonke izithombe ngaphandle kwendawo. Khumbula ukuthi isibongo esihlakaniphile, sisho phakathi kwezinye izinto ukuthi, isithombe esisifaka imininingwane ye-GPS sizonyamalala kule albhamu kanti leso esifakwe ngaphandle kwemininingwane, sizovela kuso.
Manje kufanele sikhethe zonke izithombe ezikule albhamu, ngaphandle kwendawo, endaweni efanayo. Ngabo abakhethiwe, chofoza ku-Cmd + i. Manje kuvulwa imenyu, lapho inketho yokugcina ikhona: nikeza indawo. Lapha kufanele sifake ikheli, ngokunembile ngangokunokwenzeka. Isayithi okukhulunywa ngalo kufanele liphume, kepha isiphakamiso uma lingaphumi okokuqala. Vula Amamephu bese uthola igama elisetshenziswa Amamephu, ulikopishe futhi ulinamathisele esigabeni esedlule bese uzoligcina endaweni yalo ngqo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Faka i-geolocation ezithombeni zakho kusuka kuhlelo lokusebenza lwezithombe
Funda futhi uthuthukise ukuthayipha kwakho ngohlobo lwangakwesokudla